တရုတ်သန့်ရှင်းရေး Solutions, ဖလိုရင်းအရည်, Electron ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း
ဖေါ်ပြချက်:ပျော်စေအဖြေရှာခြင်း,ဖလိုရင်း solvent,အီလက်ထရွန်ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက်,အီလက်ထရောနစ် Precision သည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက်,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Hydrofluoroether သန့်ရှင်းရေးကိုယျစားလှယျ > အီလက်ထရောနစ် Precision သည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက်
အီလက်ထရောနစ် Precision သည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ပျော်စေအဖြေရှာခြင်း, ဖလိုရင်း solvent ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, အီလက်ထရွန်ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
တိကျဘို့ကောင်းသောလျှပ်စစ်လျှပ်ကာသန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လျှပ်ကာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး HFE ဆပ်ပြာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
HFE Poisonless နှင့်တိကျဘို့အန္တရာယ်ကင်းဆပ်ပြာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တိကျဘို့ပတ်ဝန်းကျင်-ဖော်ရွေသန့်ရှင်းရေးအရည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အီလက်ထရောနစ်တိကျဘို့ HFE Hydrofluoroether ဆပ်ပြာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Poisonless အီလက်ထရောနစ်တိကျဘို့အရည်သန့်ရှင်းရေး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
HFE အီလက်ထရောနစ်တိကျဘို့သန့်စင်ခွဲထုတ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အီလက်ထရောနစ်တိကျဘို့အရောင်မဲ့ဆပ်ပြာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Hexafluoropropyl မီသိုင်းအီသန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အီလက်ထရောနစ် Precision များအတွက် HFE သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တိကျဘို့ကောင်းသောလျှပ်စစ်လျှပ်ကာသန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် Hydrofluoroether ဆပ်ပြာအရောင်မဲ့,, poisonless နှင့်အန္တရာယ်ကင်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အထီးကျန်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်-friendly ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ Hydrofluoroether...
လျှပ်ကာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး HFE ဆပ်ပြာ Hydrofluoroether သန့်ရှင်းရေးအေးဂျင့်မြင့်မားတဲ့ dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်, ကျန်ကြွင်းများနှင့်ကောင်းသောတည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲအီလက်ထရောနစ် Precision...
HFE Poisonless နှင့်တိကျဘို့အန္တရာယ်ကင်းဆပ်ပြာ Precision အစိတ်အပိုင်းများသည်သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်၏ဝိသေသလက္ခဏာများ: 1.HFE အလွန့်အလွန်နိမ့်မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုနှင့်ထဲမှာပါတဲ့ကကောင်းစွာနိုင်ပါတယ် ပျံ့နှံ့ ထွက်...
တိကျဘို့ပတ်ဝန်းကျင်-ဖော်ရွေသန့်ရှင်းရေးအရည် HFE သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ဦးထက်ပိုသောသင့်လျော်သောကြွက်ကြွက်ဆူမှတ်ရှိပါတယ်, ကောင်းစွာအမျိုးမျိုးသောအခိုးအငွေ့-သံသရာသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Hydrofluoroether...
အီလက်ထရောနစ်တိကျဘို့ HFE Hydrofluoroether ဆပ်ပြာ HFE hydrofluoroether ကောင်းစွာဖြန့်ခြင်းနှင့်ခြေရင်းပစ္စည်းမျက်နှာပြင်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအပေါက်မှလူစုခွဲနှင့်အပေါ်ယံအခွံ, စိုစွတ်စေသော, solvation...
Poisonless အီလက်ထရောနစ်တိကျဘို့အရည်သန့်ရှင်းရေး HFE သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ဦးထက်ပိုသောသင့်လျော်သောကြွက်ကြွက်ဆူမှတ်ရှိပါတယ်, ကောင်းစွာအမျိုးမျိုးသောအခိုးအငွေ့-သံသရာသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Hydrofluoroether...
HFE အီလက်ထရောနစ်တိကျဘို့သန့်စင်ခွဲထုတ် HFE သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ဦးထက်ပိုသောသင့်လျော်သောကြွက်ကြွက်ဆူမှတ်ရှိပါတယ်, ကောင်းစွာအမျိုးမျိုးသောအခိုးအငွေ့-သံသရာသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအရောင်မဲ့,, နှစ်ဦးစလုံး...
အီလက်ထရောနစ်တိကျဘို့အရောင်မဲ့ဆပ်ပြာ HFE (Hydrofluoroether) သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ဦးထက်ပိုသောသင့်လျော်သောကြွက်ကြွက်ဆူမှတ်ရှိပါတယ်, ကောင်းစွာအမျိုးမျိုးသောအခိုးအငွေ့-သံသရာသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Hydrofluoroether...
Hexafluoropropyl မီသိုင်းအီသန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် ယင်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ: 1. ။ Hfe Codorless သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်ကောင်းသောလျှပ်စစ်လျှပ်ကာနှင့်လြှပျစစျမီး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ရှင်းလင်းနိုင်သည်,...
အီလက်ထရောနစ် Precision များအတွက် HFE သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် ယင်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ: 1. သန့်ရှင်းရေးအရည် အလွန်သင့်လျော်သောကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက် (54 ℃)...
တရုတ်နိုင်ငံ အီလက်ထရောနစ် Precision သည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက် ပေးသွင်း
အစာရှောင်ခြင်းခြောက်သွေ့: ပိုမိုမြင့်မားကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက်, လုံးဝမတည်ငြိမ်သော
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး: အဘယ်သူမျှမ flash ကိုအမှတ်, Non-မီးလောင်လွယ်အရည်ထူဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူ
၎င်း၏အမြင့်ဆုံးတည်ငြိမ်မှုရန်, ခိုင်မာတဲ့အေးဂျင့်ကိုလျှော့ချခိုင်ခံ့သောအယ်လကာလီခိုင်မာတဲ့အက်ဆစ်အပြင်, အထွေထွေပစ္စည်းများသင့်လျော်ပါ၏ ဘေးကင်းဘို့အလိုငှါ, ကအသုံးပြုသူရဲ့ပထမဆုံးထုတ်လုပ်မှုမှလျှောက်ထားခြင်းမပြုမီ Compatibility ကိုစမ်းသပ်မှုနှင့်ယေဘုယျအကဲဖြတ်စေကြောင်းအကြံပြုသည်။
ပျော်စေအဖြေရှာခြင်း ဖလိုရင်း solvent အီလက်ထရွန်ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက် အီလက်ထရောနစ် Precision သည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက် ပျော်စေသားရေကား